Lezi zindlela zizokutshela ukuthi ungenza kanjani izinwele zijabule ekhaya ngezandla zakho, ngaphezu kwalokho ezivela emvelweni, imikhiqizo ewusizo. Futhi njengoba wazi, izinwele zowesifazane yingxenye ebalulekile ebuhleni bayo.
Lezi zimbewu zihle kakhulu ekuvimbeleni ukulahlekelwa izinwele nokuthuthukisa ukubukeka kwazo. Imbewu ye-fenugreek idinga ukucwilisa amahora angu-8, bese uyenza unamathisele, usebenzise izinwele, ubambe okungenani isigamu sehora, ugeze ngamanzi afudumele. Uma wenza lokhu njalo, khona-ke izinwele zakho zizobonakala zikhudlwana, ngaphandle kwalokho, ukunamathiswa kuzoqeda ukoma kwe-scalp.
Ungase futhi, uma ungenaso isikhathi, vele ugeze izinwele emva kokugeza ngamanzi, lapho imbewu ye-fenugreek yayigcwele khona. Lokhu kuzoqeda ukukhwabanisa nokuthuthukisa isimo sezinwele.
Lena ithuluzi elihle lezinwele. Thatha i-1 noma i-aloha wrestling, cindezela i-juice kubo, gcoba ngobumnene futhi ngokucophelela ku-scalp futhi ngokweqile ngokusebenzisa isigamu sehora ugeze ngamanzi afudumele, angcono kakhulu abilisiwe.
Okukhethwa kwesibili: hlanganisa ijusi le-aloe ngeqanda elilodwa bese wengeza kancane kancane kwe-brandy. Konke lo mix, sebenzisa ngaphambi kokugeza ngezinwele imizuzu engu-15 bese ugeza, njengokujwayelekile, nge-shampoo. Uma futhi udla esiswini esingenalutho nsuku zonke 1 i-spoonful ye juice le-aloe, lokhu kuzoqhubeka nokuthuthukisa isimo sezinwele zakho.
Izakhiwo eziphikisana nokuvuvukala, i-antioxidant, i-antibacterial ye-gooseberries yaseNdiya zifaneleka ngokuphawulekayo ukugcina isikhumba esinempilo sekhanda nezinwele zakho. Thatha i-spoonful ye-gooseberries eyomile, uyipheke ngezinkezo ezimbalwa zamafutha omuhle kakhukhunathi, uhlambe futhi uhlambulule ukunyakaza kancane kancane futhi ubumnene ukuya esikhwameni ngaphambi kokulala. Beka i-cap engenamanzi bese uyishiya kuze kube sekuseni. Ekuseni, hlambulula izinwele nge-shampoo.
Indlela yesibili - uma unezinwele ezinamafutha, pheka ugqumugqumu omisiwe emanzini bese ushiya ekuseni. Ekuseni, hlamba ikhanda lakho bese ugeza ngesicucu sejibiliki. Ungasebenzisa futhi amajikijolo ezokwenza ngcono izinwele.
Lesi sithelo sibuye siphume kakhulu kakhulu ekuthuthukiseni isimo sezinwele. Yenza i-avocado e-banana ne-avocado evuthiwe, uhlambulule isikhumba sesifuba, uhlaziye amazambane ahlambulukile. Shiya isikhathi esingangxenye yehora, ukuze zonke izinto ezizuzisayo zemikhiqizo zithinte isikhumba nezinwele.
I-mask yesibili - engxenyeni egciniwe yama-avocados ahlambulukile, engeza i-spoonful yamafutha omnqumo nakho konke lokhu ezinyaweni, ngaphambilini wageza nge-shampoo. Ngemva kwemizuzu engu-20 hlambulula ngamanzi bese ugeza ngamanzi acidified nge-apula cider uviniga.
Le juice izokusiza ukuba ususe amahloni, kusukela ezinhlathini ezinamafutha bese uwaqeda ngesikhathi esifanayo. Ikhetho lokuqala lilula - vele ubambe inyama bese uhlanganisa izinwele. Bamba futhi ugeze.
Indlela yesibili - lapha kuyadingeka ukuxuba uginindela we-orange ne-apula puree ezingxenyeni ezilinganayo bese wenza imaski. Hlanza ngamanzi alula emva kwesigamu sehora.
I-mask yesithathu - ezingxenyeni ezilinganayo ze-pulp orange kanye namafutha omnqumo. Ama-masks anjalo, uma uwagcina njalo, azokwenza ngcono kakhulu isimo sezinwele zakho.
Indlela yokuvuselela izinwele ngemva kolwandle
Uma uvela olwandle, uyaqaphela, mhlawumbe, izinwele zakho emva kwamanzi olwandle kanye nosuku olushisayo alishintshile kangcono. Ngakho-ke, sidinga ngokuphuthumayo ukuvuselela kubo. Kungenziwa ngokumane futhi kalula.
Thatha ingilazi encane yobisi oluketshezi, amafutha amaningi e-zheolivkovogo, hlanganisa, engeza khona ama-droplets ama-3 noma 4 ama-ethereal (mhlawumbe i-rosemary) bese usebenza ezinyaweni, ekuthunzeni nasekhanda. Gqoka i-cap engenamanzi, kusuka phezulu ubophe ithawula elithambile elinesimiso, ngisho ne-top-dry. Ngemuva kwesigamu sehora, hlamba izinwele nge-shampoo evamile futhi ujabulele ukubukeka kwazo okukhazimulayo.
Kungcono kakhulu ukukhetha ukunqunywa kwezinwele
Indlela yokuphatha ukwelashwa kwezinwele zokulahleka kwabantu
2 Izindlela Zokuvuka Ekuseni Ngezinwele Ezibukhali
Izitayela zezinwele kubandakanya ukukhanga
Imisipha yeMasks Yokuqinisa Nokukhula Kwezinwele
Ukupheka okusheshayo ngokushesha
Ukuhlanza nsuku zonke ubuso obusweni
I-ayisikhilimu kusuka ku-blueberry ne-currant ebomvu
Iphutha elimnandi nelinomsoco ekuseni
Imikhiqizo eyingozi esikhumbeni
Ex- "Ivanushka" U-Oleg Yakovlev washonela enkampanini enkulu yokunakekelwa emtholampilo waseMoscow
Buyela emsebenzini emva kwekhefu lokubeletha
Kungenzeka yini ukuthandana ne-interlocutor yangempela?
Ungayilungisa kanjani umzimba ngomnyaka omusha?
Izambatho zangaphansi kwabesifazane abakhulelwe